Norsomnews, Forfatter hos NorSom News - Side 3 av 239
UK: Hadii aan qoxootinimo na weydiisato, Ruwanda ayaa lagu geyn.
Booliska Drammen: Waxaan qabanay darawal qaad cunayo.
Norsomnews - 11. april 2022
Haweeneyda xagjirka midigta fog oo markan ku guuleysan karta doorashada Faransiiska.
Ukraine oo xirtay 2200 nin oo rabay inay qaxaan.
Wasiirka difaaca Norway oo is-casilay: Xiriir galmo uu gabar 18 jir ah la lahaa darteed.
Cuno-qabateyn la saaray gabdhaha Putin.
Norsomnews - 7. april 2022
Bærum: Nin ku eedeysan dilka hooyadii oo ay boolisku xireen.
Booliiska ayaa ka walaacsan in qaxootiga Ukraine ay la kulmaan gabood-falo.
Mooshin: Ap oo diiday in xiliga kala noqoshada dhalashada Norway la xadido.
Wuxuu rabay inuu gubo kitaab quraan ah: Leysinkii ayay boolisku ka qaadeen.
Nin kufsaday gabar qoxooti reer Ukreyn ah oo xabsiga la dhigay.